Russell Crowe. Mavara ayo matatu akanyanya kukosha. | Zvazvino Zvinyorwa
Russell Crowe. Mavara ayo matatu akanyanya kukosha.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Novela, Nhema nhema, dzakawanda
Es Russell Crowe, chido changu chezvido zvecinematographic, uye nhasi izuva rake rokuzvarwa. Uyu mutambi, akaberekerwa kiwi muWellington, New Zealand, uye akarera koala yeAustralia (ikozvino ave hombe huru), akaita ZVESE mumabhaisikopo, akanakisa uye akaipisisa, uyezve, ine mavara mashoma ekunyora kune mbiri yake. Saka nhasi ichi chinyorwa chega pega apo zvido zvangu zviviri, mabhuku uye cinema, zvinowirirana pakakwirira.
Kunyangwe paine zvimwe zvakawanda mune rake basa, aya matatu mavara ezvinyorwa ndiwo akakosha kwazvo. Bud chena (izvo zvakamupa iye wekutanga budiriro yepasirese uye kuzivikanwa), Jack Aubrey y Javert, yakagadzirwa nevanyori vatatu vakasiyana chaizvo. Ndinozviongorora. Kuti zvakapetwa, mudzimai, uye kuti ndinovaona. Koala kana chero zvazvinotora.
2 Bud White - LA Chakavanzika (1997)
3 Jack Aubrey - Master uye Commander (2003)
NaCrowe hapana nzvimbo yepakati. Ivo vangangoita 20 makore kuseri kwehupenyu hwake uye zvishamiso uye ini ndakasangana nemhando dzese dzevateveri vekusimudzira kana vanotsamwa vanokanganisa basa rake kana iye munhu. ndine anecdotes kwese uye ini ndakarwa hondo chaidzo uko kwese ropa rinofungidzirwa rakadeuka. Chero ani anoziva nyika ye fan anozviziva kwazvo.
Asi zvisinei nerudo uye kuvenga kwemutambi uyu mune chero chikamu chake, kana paine chimwe chinhu chinoratidzira basa rake mufirimu, nderake kugona kunyangarika mune mavara aunotamba. Zvakare zvisinei nezvavanofarira zvemumwe kana mumwe wemafirimu avo anodarika makumi matatu kana hunhu hwavo hukuru kana hudiki kana kubudirira kubudirira, chinzvimbo ichocho chinochengetwa mune ese iwo. Kana iyewo achiperekedzwa neshanduko yake yemuviri pane akati wandei, iwe wakangoona chete hunhu.
Iyo poindi ndeyekuti chaizvo, ndiani watakava naye pamberi kanopfuura kamwe chete kumurume uyu, isu tamupa ruoko rwake uye tatsinhana shoko naye, tinogona kupupura kuti kugona uku i kuratidzira kwekunze kwesimba remukati zvinenge zvinonzwika. Simba iro rinozadza uye kuyambuka skrini uye haridi mazwi ekutaura chero manzwiro. Semunhu uye sehunhu. Uye iyo gallery yevatambi yakareba kwazvo, asi ikozvino tiri kuenda neaya matatu echokwadi ezvinyorwa.
Bud White - LA Chakavanzika (1997)
Ini ndaizoda a gumi nemaviri zvinhu kukwanisa kutsanangura, kutaura kana kuratidza zvinorehwa nehunhu uyu mufirimu rangu, zvinyorwa uye hupenyu hwega, saka ndichafanirwa kunamatira kukongiri. Pamusoro peangu runyorwa rurefu rwevatambi vakakwanisa kuzadza mweya wangu kusvika pamuromo nemanzwiro, Agent (akazotevera Sajeni) Wendell "Bud" White ndiye yekutanga nekure uye par pamwe nemumwe wezvemazuva ano wekuNordic waanoshanda naye.
Gadzirwa na James ellroy, Muchena ndeimwe yemitezo yeUtatu Hutsvene hwemapurisa vano nyeredzi mune inovavhiti iyo Mad Imbwa yakabereka muna 1990. Zvizhinji zvekuda kwangu rudzi rwevatema kuri nekuda kwekuita kwaCrowe mune zvinoshamisa zvinoshamisa yakasainwa naCurtis Hanson makore manomwe gare gare. Iyo ndiyo yakanditungamira kunoverengeka. Kubva ipapo kuti udye zvese zveEllroy uye tambira kamwechete uye zve zvese izvo iyo maheroheroes uye echirume ekunyora mavara, akasviba, anotambudzwa uye semusango seakadzika vanhu hutera hwangu.
Kubatikana kwangu kwaive zvekuti ndakatonyora nyaya yangu ndega sekuenderera mberi pane zvakasara zvepamoyo iyo firimu uye novhero yakandisiya. Uye handina kuzeza kufunga Bud se basa rakanakisa yebasa rose raCrowe.
Jack Aubrey - Tenzi uye Commander (2003)
Iwe unogona kutaura zvakafanana kuCaptain Jack Aubrey. Nekuti pandakaziva kuti Crowe aizoiridza, ndakaendawo kunotora zvese nautical novel akateedzana yakanyorwa na Patrick O'Brian. Nekuda kubva paudiki kune iyo genre ye adventures uye, kunyanya, yeavo vanopfuura pagungwa nezvikepe zvinofamba, Ndaiva navo vakamirira uye kutora mafirimu kwemuvhi chaive chikonzero chakakwana. Ndakaaverenga ndichiteedzana.
Kubva peji rekutanga remanheru emimhanzi muMahon apo Aubrey naStephen Maturin vakasangana, ndakaziva kuti Crowe achazviita zvakare. Nomuzvarirwo ndakapedza kuverenga nhevedzano nguva refu mushure mekuona bhaisikopo Saka zvaive zvakadaro. Iyo zvine ruzha, mudiwa wemimhanzi, akashinga, akanyanyisa, asina hanya asi zvakare anenge asina mhosva Royal Navy Kapteni Jack Aubrey aigona kungove mune mumwe munhu akaita saCrowe.
Asi paivewo newaaigara naye Peter weir kutungamira basa. Uye ndiani anoziva bhaisikopo remutungamiriri ane mukurumbira anoziva nezvake kunaka kuravira uye zvirinani ita mukugadzira mifananidzo. Kana iwe ukawedzera varidzi vevatambi veBritish vese vakazvarwa kumabasa avanotamba, iyo mhedzisiro inoshamisa. Ehezve, kuti uverenge enganonyorwa iwe unofanirwa kuda iyo genre. Kana zvisiri, vanogona kunge vachinyanya kuita hunyanzvi nekuda kwemutauro wavo.
Javert - Zvinoshungurudza (2012)
Iyo firimu inoenderana ne mumhanzi wengano yakagadzirwa neFrance Claude-Michel Schönberg uye Alain boublil aive nerombo shoma. Kubva pane imwe yekirasiki yezvinyorwa zvekare zvezvinyorwa kwete gala chete asi pasi rose rakasainwa ne Victor Hugo, mimhanzi yacho inogona chisingakanganwiki yezvakawanda zvakagadzirwa. Uye pasina kupokana akabudirira kwazvo, zvakanyanya zvekuti zvingangove zviri nani kuzivikanwa uye kusarudzika kupfuura inova pachayo.
Así Zvinoita kunge kambani ine njodzi zvakanyanya inoswedera pedyo nemifananidzo kune inoyevedza staging zvese yekumisikidza uye zvechokwadi kune mhenyu kurira kweayo asingakanganwiki mimhanzi nenziyo. Uye parutivi irwo runyorwa rusingaperi rwevaimbi avo vatendeuka uye vopa manzwi asinganzwisisike kune mavara akadai Jean Valjean, Javert, Fantine, Eponine kana Cosette.
Mutungamiriri weBritish Tom hooper akashinga makore mashoma apfuura uye aida kuve, zvirinani, masimba ekuvapo uye manzwi aiteerera. Hafu wakachiwana mune anoonekwa zvinhu, asi zvakasara zvichisara kumashure mumubvunzo wemimhanzi. Vatambi vaida kusangana Hugh Jackman kana Samantha Banks, iine ruzivo rwakawanda rwemimhanzi. Kana imwe Anne Hathaway uyo akatora Oscar kuti anyatsotsigira mutambi wechiitiko chinonakidza cheFantine uye anopfuura hunhu Eddie redmayne saMarius.
Uye mudiwa wangu Russell aifanira kungoisa saber neunifomu yekupa kurongedza nehunhu zvakafanira uye zvakakwana kune izvo rakasviba uye rinotarisa Javert. Zvakwana kupa izwi rake rakaganhurirwa, iyo inoshanda mune mamwe marudzi zvakanyanya zvake pane mumhanzi une hunhu hwakakura senge Zvinoshungurudza. Asi, zvakare, ndiani asina kupofumadzwa nerudo, handiti? Zvakanaka izvo.
Kuziva zvakawanda: Russell Crowe. Mune technicolor, changamire ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Russell Crowe. Mavara ayo matatu akanyanya kukosha.
Ini ndinogovana kusvika komma yekupedzisira, yeiyi inoshamisa zvinyorwa zvekuverenga iwe zvawakaita kutora mukana wezuva rekuzvarwa remutambi anoshamisa uyu. Iyi inguva yekuti isu tese takada mafirimu aya kuenda kunzvimbo yekutanga. Ndinofanira kubvuma kuti ndiri simbe kwazvo kana zvasvika pakuverenga bhuku, asi izvo zvakagara zviri muraibhurari yangu. Ndatenda Mariola nerwendo urwu rwakanaka kwandiri nostalgic, nekuti ndiri kutarisira kutifadza zvakare nehunyanzvi hunyanzvi hwekuita, pamwe kubva kune imwe huru novel.
Pindura kuna Eugenia
Yakanakisa chinyorwa, Mariola.
Zvirokwazvo, kwandiri, zvakare kuita kwaCrowe muLA Confidencial ndeimwe yeakanakisa, kana asiri iwo akanakisa, ebasa rake, zvirinani kuHollywood. Nekuti ini ndaonawo mamwe emitambo yake yehudiki kuAustralia uye, chaizvo, muRomper Stomper kana muTiri Vaviri akaitawo hunyanzvi hwekuratidzira uyo unobvisa ngowani yake… sevose vaanoita.
Ndatenda zvikuru nemhinduro dzenyu. Iwe unoziva kuti tinobvumirana zvizere pane iyi NHAURWA. Kumbundira.
anogara mune zvese
Algernon Charles Swinburne, akatuka mudetembi wechiVictorian